သားဖွားမီးယပ်အထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / သားဖွားမီးယပ်အထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 1,775 views
အလုပ်သမားသို့မဟုတ်သားဖွားနှင့် detect သောသူတို့အားနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကြမ်းများပေးသူကိုဆေးသမား, ကိုင်တွယ်, နှင့်မင်းသမီး၏အခွအေနတားဆီးအတွက်အကူအညီပေးရန်, အဆိုပါမျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လွှမ်းမိုးအထူးသဖြင့်သူတို့အား. ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုယေဘုယျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း.
နည်းစနစ်ထုတ်ဖေါ်နှင့် client များ အသုံးပြု. စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်သို့မဟုတ်ပေးသောကုထုံးဆွေးနွေးရန်.
အပိုဆောင်းခွဲစိတ်အဖြစ်သို့မဟုတ် peopleWI ကျန်းမာရေးရေရှည်တည်တံ့နဲ့လုံလုံခြုံခြုံကလေးထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ် cesarean အစိတ်အပိုင်းများကိုပြီးမြောက်.
ဆေးတစ်လက်သတ်မှတ်သို့မဟုတ်ဆပ်, ဆေးဝါး, အဖြစ်အခွအေနေဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်လျှော့ချဖို့နဲ့အခြားကြောင်းအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ရောဂါကူးစက်, သို့မဟုတ်အန္တရာယ်.
စစ်ဆေး-up, သတင်းအချက်အလက်စစ်ကြော, ပုံပြင်များ, အကြိုးခံစားခှငျ့စစ်ဆေး, လူနာများ၏အခွအေနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒါမှမဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများ.
စုဝေး, ဖိုင်, နှင့်တစ်ဦးချင်းဒေတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းအဖြစ်, ပုံပြင်များ, နှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရလဒ်များကို.
ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးကိုရည်မှတ်လူနာနှင့်ရပ်ရွာကလူကိုလမ်းညွှန်, နှင့်လှုပ်ရှားမှု, ကိုယ်ခန္ဓာသန့်ရှင်းရေးပညာ.
အတူ Check သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအပိုဆောင်းဆရာဝန်များကထောက်ပံ့.
ချက်ချင်းယောဂီ၏လုပ်ရပ်များကိုသြဒိနိတ် , ကျောင်းသား, လက်ထောက်, ပညာရှင်များ, သူနာပြုများ, သည်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ.
မဟာဗျူဟာ, လျှောက်ထား, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကျန်းမာရေး applications များစီမံခန့်ခွဲ, ယာဉ်မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ်ရပ်ကွက်.
ဝန်ထမ်းများထောက်ခံစာအပေါ်အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီအစီရင်ခံစာများကိုပြင်, ပို့ခြင်း, သေဆုံး, နှင့်ရောဂါကူးစက် stats, တစ်ဦးချင်း၏သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဆေးပညာဂုဏ်သတင်း.
ကုသထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု Perform, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ရောဂါသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာတားဆီးသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အခြားလူများပြောနေကြသည်အရာကို active နားထောင်ခြင်း-ပေးဝေနေတပြင်လုံးကိုအသိပညာပေး, created ခံရသည့်အမှုအရာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာကြားဖြတ်မဟုတ်.
မစိုက် data တွေကိုဝေမျှဖို့တခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်-Speaking.
ကြောင်းဝေဖန်-အသုံးချပြီးဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အပြစ်အနာအဆာများနှင့်ရှေးခယျြမှု options များ၏အားသာချက်ဆိုတာတွေ့ရဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်စဉ်းစား, အခက်အခဲများမှစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အလားအလာရှိသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်း-သိမှတ်ကြလော့သတင်းအချက်အလက်သစ်များရဲ့ဂယက်.
သင်ယူလတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကြားမှုအခါတိကျတဲ့အခွအေနေတငျပွ educationANDtutorial ချဉ်းကပ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနည်းလမ်းများ-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသုံးချဖို့.
စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး-ကြီးကြပ်နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစူးစမ်း /, သင်ကိုယ်တိုင်, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအောင်သို့မဟုတ်ကုစားလုပ်ရပ်များယူ.
လူမှုအခြားသူများကိုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်း’ သူတို့လုပျအဖြစ်သူတို့ reply ဘာဖြစ်လို့သဘောထားတွေနဲ့အသိပညာ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-Active ရှေးရှေးကူညီရန်မဟာဗျူဟာရှာဖွေနေ.
အဆင့်မြင့် Problemsolving-ဖော်ထုတ်ခြင်းရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေအချက်အလက်များသုတေသနအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုဆောနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်.
နည်းပညာဒီဇိုင်း-အဆောက်အအုံသို့မဟုတ် align လုပ်ဖို့ကိရိယာများနှင့်လူတစ်ဦးလိုအပ်ချက်များကိုကူညီပေးဖို့နည်းပညာများ.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ် tools များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း execute မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့မျိုး.
အရစ်ကျ-Installing မော်ဒယ်များ, devices များ, ဝါယာကြိုးများ, သို့မဟုတ် packages များကျန်တာတွေဖြည့်ဆည်းရန်.
အတော်ကြာဖြစ်ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ-ထုတ်ဝေကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်-လေ့လာခြင်းစမ်းသပ်မှု, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသင့်လျော်စွာဖျော်ဖြေမယ့်စက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
functioning နှင့်ဤအကြောင်းကိုသွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းတင်းတင်းပြောတတ်တဲ့နောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ကိုစူးစမ်းအချက်များ.
ဆန္ဒရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. ပြုပြင်-ပွငျအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏စာမေးပွဲ-ပွုလုပျခွငျးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, ပံ့ပိုးပေး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
စနစ်၏ analysis-ဖော်ထုတ်ခြင်းအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်လမ်းတိုးတက်မှုသင့်တယ်, အခွအေန, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကို impact စေခြင်းငှါ.
စက်ပစ္စည်း၏ပန်းတိုင်စနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆွေမျိုးများ၏စနစ်များကိုအကဲဖြတ်-ကိုစူးစမ်းခြေလှမ်းများသို့မဟုတ်လက္ခဏာများ, တိကျမှုသို့မဟုတ် performance ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်အပြုအမူ.
အခြားသူများကိုအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-ကိုင်တွယ်ခြင်း’ အခါသမယအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယခုအချိန်တွင် oneis.
ပစ္စည်းများထုတ်ကုန်များသင့်လျော်သောသုံးအရင်းအမြစ်များ-ရယူခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်၏အုပ်ချုပ်ရေး, ထူထောင်မှု, နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအချို့သော function ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်း၏ကြီးကြပ်မှုအရင်းအမြစ်-တည်ထောင်ရန်, လှုံ့ဆျောမှု, သူတို့လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်များ directing, task ကိုများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသွား.
ထက်ပိုပြီး4နှစ်ပေါင်း, အထိ6နှစ်နှင့်အပါအဝင်,
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးစားခြင်း – 96.18%
ဆုံးဖြတ်ချက် – 94.79%
စီမံကိန်း – 90.85%
အာဏာ – 90.08%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 95.73%
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – 96.80%
လူမှုနေရာချထားခြင်း – 87.01%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 96.39%
ဖိအား Threshold – 97.20%
ပါဝင် – 99.20%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 99.20%
ကျင့်ဝတ် – %
လွတ်လပ်ရေး – 92.48%
တိုးတက်ခြင်း – 87.36%
စဉ်းစား – 91.53%